China Superfine Ferro-phosphorous Powder rụpụta na ụlọ ọrụ | Noelson
Superfine ferro-phosphorus powder dị na gburugburu ebe obibi nwere ụdị ngwaahịa ọhụụ, ntụ ntụ-ntụ ntụ, nke na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi, enweghị isi pụrụ iche, na-enwe ezi mmekọrịta na nrụpụta nke okpomọkụ, anticorrosion, na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide okpomọkụ (agba agba nwere ike iguzogide 600 -1000 ℃ okpomọkụ dị elu).
Superfine ferro-phosphorus powder dị na gburugburu ebe obibi enyi na enyi ụdị ngwaahịa ọhụụ, ntụ ntụ-ojii ojii, nke na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi, enweghị isi pụrụ iche, na-enwe ezi mmekọrịta na nrụpụta ọkụ, mgbochi mmebi ahụ, na-egbochi imegide, na-eguzogide okpomọkụ (agba agba nwere ike iguzogide) 600-1000 ℃ elu okpomọkụ). Ngwaahịa nwere oke uru ya na arụmọrụ kacha mma, arụmọrụ kacha mma bụ na ọ nwere ike dochie akụkụ nke (ihe dịka 20-50%) ntụ ntụ zinc dị oke ọnụ, maka nhazi na mmepụta nke epoxy ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta zinc bara ụba, nwekwara nnukwu itinye. ụlọ ahịa primer ma ọ bụ ndị ọzọ na-emepụta anticorrosion, bụ ezigbo ngwaahịa maka mwepu ego na mpaghara ndị ọrụ mmepụta ihe na-arụ ọrụ, na-ejikwa ya mee ihe na agba agba, agba mmiri, na ụdị ụdị nchara ígwè ọ bụla, mkpuchi mkpuchi, mkpuchi mkpuchi okpomọkụ Sistemụ, ọ kachasị amasị ya ma nabatara ya nke ọma site na ndị ahịa mkpuchi. ugbu a anyị bụ ndị na-eduga emeputa na nke kacha mma mma na kasị mmepụta na China.
(ọ bụla nkọwapụta chọrọ nwere ike ịtụle maka omenala imewe)
Ndepụta Teknụzụ Ngwaahịa
Mkpụrụ mmanụ na-amị bara uru g / 100g
(dị iche iche fineness ikwu dị iche iche n'ihi mmanụ absorption)
►Mee ka mkpuchi ihe nkiri na ịgbado ọkụ nke zinc jupụtara na agba, belata ájá nke zinc mgbe anyị na-agbado ọkụ ma belata, melite ebe ọrụ anyị, mee ka ọkwa nchebe ọrụ anyị dịkwuo elu.
►Nyere ulo oru aka belata onu ahia nke imeputa.
►Mee ka ngwongwo nke ngwaahịa a dịkwuo mma, nke kwesịrị ekwesị maka nchekwa nchekwa na usoro mkpuchi anticorrosion.
► Adabara iche iche nke ụlọ ahịa primer na ụlọ ọrụ agba, nwere ezi anticorrosion arụmọrụ.
► Standardkpụrụ Executive: National GB3210-82 na Enterprise NS-SFPP01-10.
NOELSON ™ SFPP, anyị na -ewe ihe kasị mma anụ ụlọ raw ore maka mmepụta, na ike size na olu nke mmepụta na-ibu na ibu, na-eduga nnukwu ahịa òkè dị n'ime obodo China, nwere bukwanu mmetụta ma n'ụlọ ma n'ụgbọ. Anyị na-enye ngwaahịa na mma kacha mma, omume nchịkwa njikwa, agba edo, asọmpi ego. Na mgbakwunye na ngwaahịa enyere, anyị na-enye ndị ahịa niile ọrụ nyocha na ọrụ zuru oke. NOELSON ejiri ezigbo ntụ ntụ na ngwaahịa ndị pụrụ iche pụrụ iche, na-abụkarị akara ngosi kacha mma na ọrụ kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ.
25kgs / akpa ma ọ bụ 500kgs / akpa, gburugburu 18-22tons / 20'FCL.
Nke gara aga: Nduzi Titanium dioxide